TOP NEWS: Dhageyso Qaar ka mid ah Aradada Iskuulada Muqdisho oo Ku dhaqaaqay Arin Muhiim ah iyo Xildhibaanada Baarlamanka oo Bogaadiyay – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Dhageyso Qaar ka mid ah Aradada Iskuulada Muqdisho oo Ku dhaqaaqay Arin Muhiim ah iyo Xildhibaanada Baarlamanka oo Bogaadiyay
by admin 16th April 2016 012
Gudi ay ku mideysanyihiin Ardada Iskuulada Gobolka Banaadir ayaa isku xil qaamay in ay u gurmadaan Qoysaska Yamaniyiinta ah ee ku nool Magaalada Muqdisho.
Deeq Raashin ah ayaa la gaarsiiyay Qoysaska ka so qaxay wadanka yaman ee ku Nool Magaalada Muqdisho waxaana Munaasabada deeqdaasi lagu gaarsiinayay ka qeyb galay Xildhibaano ka tirsna Baarlamanka Federaalka.
Xildhibaan Ibraahim Saalax dayfullah oo ka mid ah Mudanayaasha Baarlamanka oo Kulanka ka qeyb galay ayaa uga mahad celiyay Dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku xil qaantay in ay u gurmadaan walaalaha yamaniyiinta ee dalka soomaliya kusoo qaxay gaar ahaan qoysaska ku nool magaaladaMuqdisho.
Xildhibaanka waxaa uu xusay in wax lagu farxo ay tahay in shacabka soomaliyeed ay u gurmadaan qoysaska yamaniyiinta iyagoo gartay masuuliyada ka saaran walaalahooda ka soo qaxay colaada ka socota dalka yaman.
Fardowsa daahir Cabdi Raxmaan oo ka mid aheyd Ardada lacagaha iska soo uruurisay ayaa ka hadashay waxyaabaha ku dhaliyay in iyagaa oo arday ay isku xilqaameen u gar gaarida qoysaska Yamaniyiinta .
TOP NEWS: ICRC iyo iyo Bisha Cas oo Deeq Raashin ah Gaarsiiyay 60 kun oo Ruux ay waxyeelo gaarsiisay Abaarta ku dhufatay Gobolada Dalka
Daawo: Wasiirka Maaliyada Soomaliya oo Khudbad Xasaasi ah ka jeediyay shirkii sanadlaha ahaa ee Bangiga Aduunka iyo IMF
Xiisad aad u kacsan oo Mandheera ka jirta kadib markii……………
Kashifaad: Mareykanka oo si aan horey loo arag u bahdiley Madaxweyne Xassan Iyo RW Sharmarke.
admin 5th June 2015 27th August 2015
WAR CUSUB: Ra’iisul Wasaare Cumar oo uga Mahadceliyey Dawladda Talyaaniga Taageerada ay siinayso Soomaaliya +Sawiro
admin 27th March 2016 27th March 2016